Izay araka ny lalàna ihany aloha… | NewsMada
Izay araka ny lalàna ihany aloha…
Par Taratra sur 28/04/2018
Hanao ahoana ny hiafaran’izao raharaha izao? Hetsi-bahoaka, vokatry ny fiaretana hatramin’izay. Fifampidinihana momba ny lalàm-pifidianana mampifanditra no mahatonga izao korontana izao, ohatra, sa fampiharan-dalàna ny amin’izany?
Andrasana izay ho fanapahan-kevitry ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ny lalàm-pifidianana bontolo sy nolanina tamin’ny alalan’ny kolikoly: hatao fahoany fahoany ihany sa haverina tanteraka ny fandinihana sy fandrafetana azy?
Mandra-pitrangan’izay hitranga, takina sy andrasana ny vokatry ny fanadihadian’ny Bianco ny amin’ny fisian’ny kolikoly tamin’ny fandaniana io lalàm-pifidianana io. Mila hampiharan-dalàna sy fanasaziana amin’izany ny mpanome sy mpandray kolikoly.
Tsy mifankaiza amin’izany koa ny tana-mihosin-dra tamin’ny fandatsahana aina teny amin’ny lapan’ny Tanàna, Antananarivo Renivohitra, ny 21 avrily lasa teo. Mila fampiharan-dalàna izay tena atidoha nikotrika, ny mpanapa-kevitra, ny mpanome baiko…
Ho vitavita sy tsy hitahita ho azy amin’ny hoe fifanatonana sy fifampidinihana ve izany? Eny, na amin’ny fampihavanana aza… Fanamby sy hirahiraina mandrakariva ny hoe fanjakana tan-dalàna, ady amin’ny kolikoly, ady amin’ny fisian’ny tsimatimanota…
Iza na inona no hahazoana manatanteraka izany rehetra izany? Eo, ohatra, ny fanajana sy fampiharana ny lalàna velona. Ho sahy hanao sy hahavita izany ve ny fitondrana sy ny rafitra amin’izao fotoana izao? Ao anaty tsy fifampitokisana tanteraka tsinona…
Tsy aiza ny takatra mihinana ny valala fa ao ihany, na ny vano mitsaingoka ny sahona. Hisy hamaham-basy hitifirana ny tenany? Izay no raharaha be. Mila fandinihana lalina? Sao misy ny tsy maty voalavo an-kibo, na mamono biby tsy mahafaty.
Eo ihany ny hoe izay araka ny lalàna ihany aloha. Na izany aza, politika izao: mila vahaolana politika… Hanao ahoana ny ho tohiny sy hiafarany? Ny ela manova zavatra amin’ny hoe lazon’ady, na arakaraka ny anaovana bemarenina no mampilentika.